एजेन्सी - विश्व प्रसिद्ध सामाजिक संजाल फेसबुकले पठनीय सामाग्री मात्र प्रकाशित गर्नका लागि यसैवर्ष न्युज ट्याब फिचर ल्याउँदै छ। फेसबुकले आफ्नो न्युज ट्याबमा गुणस्तरीय समाचार तथा समाग्री प्रदान गर्नका लागि एबीसी न्युज तथा वासिङ्टन पोस्टजस्ता विश्वसनीय संचारमाध्यमसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरिरहेको.....
अहिले धेरैले फेसएप एप प्रयोग गरेर प्राप्त परिणाम हजारौँ मानिसले सामाजिक सञ्जालमार्फत्‌ सार्वजनिक गरिरहेका छन्। अनुहारको तस्बिर सम्पादन गरेर साबिकको भन्दा युवा वा वृद्ध अवस्था देखाइदिने एप फेसएपबारे अहिले सबैतिर चर्चा भइरहेको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि चर्चामा रहेको उक्त एपबारे कतिपयले भने चिन्ता व्यक्त.....
बुधबार फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा एकैसाथ देखियो प्राविधिक समस्या !
एजेन्सी-बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा एकैसाथ प्राविधिक समस्या देखिएको छ । फेसबुक लगायत वाट्स एप्स,म्यासेन्जर, इन्स्टटाग्राममा प्राविधिक समस्या देखिएको हो । बुधबार बिहानबाट सामाजिक सञ्जालहरुमा एकैसाथ यो समस्या देखिएको थियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा समस्या देखिएपछि बुधबार बिहान.....
“टिकटकमा” यसरी भेटियो ३ बर्षदेखि हराएका “श्रीमान्” !
कहिले काहीँ कल्पना समेत गर्न नसकिने कुराहरु आफ्नै जिन्दगिमा पर्न जान्छ । यस्तै प्रसङ्ग, भारतको तामिलनाडु प्रान्तकी एक महिलाले तीन वर्षदेखि बेपत्ता भएका श्रीमान् फेला पारेकी छन् । हराएका श्रीमान्सँग उनको भेट टिकटकले सम्भव बनाएको हो । तामिलनाडुको कृष्णनगरीका सुरेश नामक व्यक्ति सन् २०१६ मा आफ्नी श्रीमती.....
अब नेपालमा दर्ता नभएका र तस्करी भएर आएका मोबाइल सेटहरू नचल्ने !
नेपालमा दर्ता नभएका र तस्करी भएर आएका मोबाइल सेटहरू चल्न नदिने मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडिएमएस) कार्यान्वयन गर्ने कम्पनी छानिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र मागिएको १४ महिनापछि न्युमेरा एसडिएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन पिटिई लिमिटेड सिंगापुरको.....
काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने २३ वर्षीया कल्पना ९नाम परिवर्तन०को विवाह भएको १५ दिन मात्रै भयो। उनलाई फेसबुकबाट धेरैले शुभकामना दिए। तर, एक युवाले कल्पनासँग खिचेको फोटो राखेर कमेन्ट गरे। त्यसमै केहीले ‘अर्काको गलफ्रेन्ड चोरेर विवाह गर्ने’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाए। ती युवती र उनका पतिले उक्त घटना सहन सकेनन्।.....
फेसबुकले भिडियो च्याट एप बन्द गर्ने, अन्य बिशेषताहरु थप्दै
फेसबुकले आफ्नो भिडियो च्याट एप बन्द गर्ने भएको छ । ग्रुप भिडियो च्याटको प्रमुख एप हाउसपार्टीको एक क्लोन बन्द गर्ने निर्णय फेसबुकले गरेको हो । द भर्जको रिपोर्ट अनुसार बोनफायर नामको क्लोन एप यहीँ महिनादेखि नै बन्द हुनेछ । सन् २०१७ को अन्त्यमा फेसबुकले डेनमार्कमा यो एपको परिक्षण शुरु गरेको थियो । फेसबुकले.....
टिकटक स्टारहरुले टिकटकबाट कसरी पैसा कमाउछन, हेर्नुहोस
बीबीसी - भिकी बनहमलाई एकदिन एउटा अनौठो फोनकल आयो । वास्तवमा उनलाई डीजे सिगालाको नयाँ एल्बमको लन्च पार्टीमा लैजानका लागि एउटा मार्केटिङ कम्पनीले फोन गरेको रहेछ । यसपछिको केही दिनमै उनले स्पेनी टापुमा डिजेको छेउमा बसेर पार्टी गरिन् । उनी भन्छिन्, “यो अपत्यारिलो तर रोमाञ्चक क्षण थियो । मैले उक्त २४ घण्टामा.....
आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट यसरी सुरक्षित राखौ, पछुताउनु भन्दा समयमा नै सुरक्षित बसौ
फेसबुक हिजोआज धेरैको दिनचर्या नै भएको छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । तर धेरैको दिनचर्या बनिसकेको यही फेसबुकले गर्दा आज धेरैले नोक्सानी पनि व्योहोर्नु परेको छ । फेसबुकका जति सुबिधा र फाइदाहरु छन् त्यति नै मात्रामा तिनका बेफाइदाहरु पनि छन् । आजकाल दिनहुँ धेरै फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुने गरेका छन् । अस्लिल सामग्रीहरु.....